Pakistan oo siideysay Duuliyihiin ay ka qabatay INDIA • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Pakistan oo siideysay Duuliyihiin ay ka qabatay INDIA
Pakistan oo siideysay Duuliyihiin ay ka qabatay INDIA
March 2, 2019 - By: Abdirizak Shiino
Pakistan ayaa sheegtay in si wanaagsan loola dhaqmay Duuliye Abhinandan Varthaman oo xalay dalkiisa dib loogu celiyey
Dowlada Pakistan ayaa xalay siideysay duuliyihii militariga India ee la qabtay labo maalin kahor kadib markii ay Pakistaan soo riday diyaaraduu waday.
Duuliyahan oo lagu magacaabo Abhinandan Varthaman ayaa xalay lagu wareejiyey ciidamada India ee ku sugan xaduuda labadaasi dal u dhaxeysa, tilaabadan oo ay Pakistan ku sheegtay mid la doonayo in lagu qaboojiyo xiisada ka dhex-taagneyd labada dal ee jaarka ah maalmihii lasoo dhaafay.
Raysalwasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa khamiistii kulan ka dhacay Xarunta Baarlamaanka ka sheegay inay siideyn doonaan sarkaalkaasi laga qabtay India si looga shaqeeyo nabadeynta labada wadan ee heysta hubka nukliyeerka.
Waxaa tilaabadan sidoo kale soo dhaweeyey Raysalwasaaraha India Narendra Modi.
Xiisada u dhaxeysa India iyo Pakistan ee la xariirta maamulka dhulka ay isku heystaan ee Kashmiir ayaa sii xoogeysatay bartamihii bishii Feberaayo kadib markii weerar ismiidaamin ah lagu dilay 42 askari oo ka tirsan ciidamada India, weerarkaasi oo ay sheegatay koox ka dagaalanta Kashmiir oo la baxday Jaysh Maxamed.
India ayaa kooxdaasi weerarka geysatay ku eedaysay inay taageerto ama soo dirtay dowlada Pakistan, dowlada India oo xiligan ku jirta ololaha doorashada ayaa dhamaadkii bishii Feberaayo amartay duqeyn diyaaradoohada la beegsadeen gudaha Pakistan, arrintaasi oo keentay jawaabta Pakistan oo iyadana soo riday labo diyaarad oo laga leeyahay India isla markaana gacanta ku dhigtay duuliyahan xalay lasii daayey .